TOYOTA စိတ်ကူးအိမ်မက်ကား အနုပညာပြိုင်ပွဲ ဆိုသည်မှာဘာလဲ။
(၁၄) ကြိမ်မြောက် (၂၀၂၁) Toyota စိတ်ကူးအိမ်မက်ကား အနုပညာပြိုင်ပွဲ (Toyota Dream Car Art Contest) ကို တိုယိုတာမော်တော် ကော်ပိုရေးရှင်းမှ စီစဉ်ကျင်းပသွားပါမည်။ ဤပြိုင်ပွဲတွင် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ အသက် ၁၅ နှစ်နှင့် ၁၅ နှစ်အောက်ကလေးများ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သော အနုပညာပြိုင်ပွဲပဲ ဖြစ်ပါသည်။
ဤပြိုင်ပွဲမှတစ်ဆင့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာရှိတဲ့ ကလေးတွေကို ဖိတ်ခေါ်၍ ၎င်းတို့၏ စိတ်ကူးအိမ်မက်ကားများကို ရေးဆွဲစေခြင်းဖြင့် အနာဂတ်ကား လောကအကြောင်း အတွေးအခေါ်များကုို မျှဝေခံစားရန် ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်မှစ၍ စိတ်ကူးအိမ်မက်ကား ပြိုင်ပွဲကို တိုယိုတာမော်တော် ကော်ပိုရေးရှင်း၏ လူမှုရေးပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုဆိုရင် နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ ကျော်က ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြပါသည်။ လွန်ခဲ့သောမြန်မာနိုင်ငံက ပြိုင်ပွဲတွင် အနုပညာလက်ရာပေါင်း ၃၀၀၀ နီးပါးတင်သွင်းခဲ့ပါသည်။
Toyota Dream Car Art Contest ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၅) ရက်နေ့မှာ စတင်ကျင်းပပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်လက်ရာများကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၅) ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီး တင်သွင်းနိုင်သည်။ အထူးဆုအနေနဲ့ Apple iPad8 128GB (4G) ကို ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး အခြားသော စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ဆုကြီးများလည်းပါဝင်ပါသေးတယ်။
လူတိုင်းသည် ၎င်းတို့၏ မဖြစ်နိုင်မှုကို စိန်ခေါ်ပြီး လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားနိုင်ခွင့်ကို ခံစားကာ အားလုံးပါဝင်နိုင်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော လူအဖွဲ့အစည်း၏ ဖန်တီးမှု့ကို ပံ့ပုိုးရန် တိုယိုတာသည် Start Your Impossible (SYI) ကို အသစ် စတင်ခဲ့ပါသည်။ SYI သည်တိုယိုတာ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်ဖြစ်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အိုလံပစ်ကော်မတီ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပါရာလန်းပစ် ကော်မတီ၊ “မဖြစ်နိုင်ခြင်း” များကို အဆက်မပြတ်စိန်ခေါ်နေသော အိုလံပစ်နှင့် ပါရာလန်းပစ်ပြိုင်ပွဲဝင်တို့၏ တိုက်ပွဲဝင်စိတ်ဓါတ်များမှတစ်ဆင့် အားတက်စေခဲ့ပါသည်။
တိုယိုတာအိမ်မက်ကား ပြိုင်ပွဲ သည် SYI စိတ်ဓါတ်ကို ပုံဖော်လျှက်ရှိပါသည်။ ၎င်းသည် ကလေးများ၏ တီထွင်ဖန်တီးမှု၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ အထူးသဖြင့် အနုပညာတွင် သူတို့၏ "မဖြစ်နိုင်ခြင်း" ဟူသော ပန်းတိုင်များကို အောင်မြင်ကျော်လွှားရန် လှုံ့ဆော်ပေးပါသည်။ Toyota သည် DCAC ပန်းချီဆွဲ ဆွေးနွေးပွဲများကို စာသင်ကျောင်းအမျိုးမျိုးတွင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ပိုမိုစည်းလုံးသော လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
အသက်ကန့်သတ်ချက် (၃) အုပ်စုစီမှ အနိုင်ရရှိသူ (၃)ယောက်ကို ဆုများချီးမြှင့်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (စုစုပေါင်း ၉ ဆု)
၁. အထူးဆု ( ပထမဆုရှင် ၃ ယောက်ထဲမှ တစ်ယောက် အတွက်)
•Apple Ipad 8 128GB (4G)
၂. ပထမဆု ( အုပ်စု ၂ ခုမှ ကျန်ရှိသောအနိုင်ရသူများအတွက်)
၃. ဒုတိယဆု ( အုပ်စု ၃ ခုလုံးမှ အနိုင်ရရှိသူများအတွက်)
• Lenovo TAB 8inches
၄. တတိယဆု ( အုပ်စု ၃ ခုလုံးမှ အနိုင်ရရှိသူများအတွက်)
• JBL Clip3 Portable Speaker